သတင်းယူရင်း ဖမ်းခံရသည့် သတင်းထောက်နှစ်ဦးကို မြစ်ကြီးနားရဲက အမှုဖွင့်
"ပိုက်လိုင်းများ ကာကွယ်ရန်" တရုတ်တပ်များ မြန်မာနယ်စပ်တွင် ချထား
“ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ဘုရားတွေက အမှန်တရားကိုပဲ စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတာ”
တမူးမြို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ် ပစ်ခတ်မှု ပြည်သူဘက်က CDM ရဲ တဦး သေဆုံး
ပုသိမ်တွင် NLD အမတ် ၃ ဦးကို စစ်တပ်က သေနတ်ပစ်ဖောက်၍ ဖမ်းဆီး
စစ်သားနှင့်ရဲ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နှစ်လအတွင်း ကလေး ၄၃ ဦး သေဆုံးခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်သစ် Facebook မိတ်ဆက်
ပြီးခဲ့သည့် Easter Sunday နေ့တွင် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်က ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ် ပြုလုပ်နေစဉ် / KBC
By ဧရာဝတီ5April 2021
ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းများကို မသင်္ကာမှု ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စစ်တပ်က ဝင်ရောက် ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဧပြီ ၃ ရက်က မိုးညှင်းမြို့ရှိ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်း၊ ရိုမန်ကက်သလစ် အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်းဝန်း၊ အင်္ဂလိကန်အသင်းတော်၏ ဘုရားကျောင်းဝန်းကိုလည်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ လက် အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့များက ဝင်ရောက် ရှာဖွေခဲ့သည်။
မိုးညှင်းမြို့ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) မှ သင်းအုပ်ဆရာ Rev. အောင်ဆိုင်းက “သူတို့က ရိုးရိုး ဝင်ရှာတာ တောင် မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းဘေး ဘက်လေးတန် အကုန်လုံခြုံရေး အပြည့်ယူတယ်။ ကျောင်းဝင်းထဲက အဆောက်အဦး အားလုံးကို ခြံစည်းရိုးကျော် ဝင်တယ်။ ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးပေါက်ကနေတော့ အရာရှိ ဆိုသူက ဝင်လာတယ်။ ဝင်လာပြီး ဘာမှမမေးဘဲ သင်းအုပ်ဆရာရဲ့မီးဖိုချောင်၊ အိမ် အကုန်ဝင်ရှာတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ စစ်သားများ ဝင်လာရာတွင်လည်း ဘာသာရေး ဆရာများကို တစုံတခု ပြောဆိုခြင်း မရှိဘဲ စီးနင်းရှာဖွေပြီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ရှာဖွေသည်လဲဟု မေးမြန်းမှသာ ဆန္ဒပြရာတွင် အလံကိုင်အဖြစ် ပါဝင်သူကို ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှိသည်ဟု သတင်း အတိအကျ ရရှိထားခြင်း၊ သင်းအုပ်ဆရာတဦး အကြောင်းကိုလည်း သတင်း ရရှိထားခြင်းတို့ကြောင့် ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဟု ပြန်ပြောကြောင်း သိရသည်။
ဘုရားကျောင်းဝင်း အတွင်းရှိ အဆောက်အအုံများ၊ စတိုခန်းအပြင် သင်းအုပ်ဆရာ၏ နေအိမ်၊ အခန်း၊ အမှိုက်ပုံးများအား လုံးကိုပါ ရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
Rev. အောင်ဆိုင်းက “ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မြေနေရာက ဓမ္မတရားကို ဝေငှပေးတဲ့ နေရာပါ။ မသင်္ကာလို့ ဝင်ရှာမယ် ဆို ရင်တောင် ဒီမှာရှိတဲ့ တာဝန်ခံ၊ သင်းအုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်၊ ခြံဝင်းထဲက သူရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဝင်ရမှာပါ။အခုက စစ်ဆင်ရေး ပုံစံနဲ့ ဝိုင်းပြီး လက်နက်တကားကားနဲ့ ဝင်ရှာတာက အင်မတန်မှ မဖြစ်သင့်တဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာမို့ ကျနော်က ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချပါတယ်။ ဘာသာရေးမြေနေရာတောင် ဒီလိုလုပ်တာ သာမန်ပြည်သူတွေ အိမ်ဆို ပြောစရာ မရှိတော့ဘူး။ အင်မတန် ကို မလုံခြုံနိုင်တော့ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
မိုးညှင်းမြို့မှ ဘုရားကျောင်းဝန်း ၃နေရာလုံးကို ဝင်ရောက် ရှာဖွေသွားသော်လည်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် ဘာသာရေးဆရာများ၊ အသင်းသူအသင်းသားများသာ ရှိသဖြင့် စစ်တပ်က ပြန်သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မိုးညှင်းမြို့ဒေသခံတဦးဖြစ်ပြီး ကက်သလစ်အသင်းတော်မှ အသင်းသား တဦးက “အဲဒီနေ့က နေ့လယ်ပိုင်း ဘုရားကျောင်း တွေမှာ ရှာခံရချိန် ကျနော်တို့လည်း စစ်ခံရတယ်။ ကျောင်းဝင်းနားမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ရပ်နေလို့ ဆိုင်ကယ်Tool Boxအကုန် စစ်တယ်။ နောက်ပြီး မြို့ထဲက ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကိုလည်း လိုက်ရှာတာ ရှိနေတယ်”ဟု ပြောသည်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဘာသာရေးကျောင်းဝင်းများကို ဝင်ရောက်စီးနင်း ရှာဖွေ သည်မှာ နှစ်ကြိမ် ရှိပြီဖြစ်သည်။
ပထမတကြိမ်က မတ် ၁၃ ရက် ညသန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ နောင်နန်းကချင်ခရစ်ယာန်ဓမ္မတက္ကသိုလ် / နောင်နန်း ကျမ်းစာကျောင်း (KTCS) ကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်သည်။
နောင်နန်းကျမ်းစာကျောင်းကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေစဉ်က ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ကို ကြိုတင်အကြောင်း ကြားပြီး ဘာသာရေးနယ်မြေအတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရန် ပြောဆိုကာ ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း မိုးညှင်းမြို့ရှိ ဘုရားကျောင်း ဝင်းများကို ဝင်ရှာရာတွင် တစုံတရာ ပြောဆိုခြင်း မရှိဘဲ ခြံကျော် ဝင်ကာရှာဖွေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
KBC ၏ ဥက္ကဋ္ဌ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန်က “ကျနော်တို့ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ဆိုတာ အမြဲတမ်း အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ပြီး ဟောပြောသွန်သင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပါ။ ခရစ်ယာန်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၊ဟိန္ဒူ၊ မွတ်စလင်အားလုံးပါ။ ဘာသာရေးဆိုတာ အမှန်တရား ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပြောဆို သွန်သင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ရှာဖွေတာ မသင်္ကကာဖြစ်ခြင်းက အတော် အရုပ်ဆိုးပါတယ်။ အကျည်းတန်စေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
သာသနာ့ နယ်မြေဝင်းများကို ဝင်ရောက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးဆရာများထံ ခွင့်တောင်းခြင်း မပြုဘဲ လက်နက် လူအင်အား အပြည့်ဖြင့် ဝင်ရောက် စီးနင်းသည့် အသွင်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းက အာဏာရှင်ဆန်သည် ဟုလည်း ဒေါက်တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန် က ဆိုသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်က “အာဏာရှင်ဆန်ဆန် လက်နက်အားကိုးပြီး နိုင်ထက်စီးနင်း ရှာတာမျိုးကို ဘယ်ဘာသာရေး အဆောက်အဦးမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ် မသင့်တော်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာ အရရော ဗုဒ္ဓဘာသာအရရော ဘုရားကျောင်းဝင်းဆိုတာ သန့်ရှင်းတဲ့နယ်မြေ ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ နယ်မြေမှာ သေနတ်တွေ ဖိနပ်တွေနဲ့ နိုင့်ထက်စီးနင်း လုပ်တာက ဘုရားမပြောနဲ့ လူတောင်မကြိုက်ပါဘူး” ဟုလည်း ဆို သည်။
စစ်တပ်သည် မတ် ၁ ရက်ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့ရှိ KBC ဘုရားကျောင်းဝန်းခြံတံခါးကို ဖျက်ဆီး ကာ ကျောင်းဝန်းထဲမှ ဓမ္မဆရာများ၊ ဘုရားကျောင်းဝန်းမှ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ သည်။
ဖမ်းဆီးရာတွင် ဘုရားကျောင်းဝန်းအတွင်း သေနတ်များ ပစ်ဖောက်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မသင်္ကာမှုဖြင့် ရဲစခန်းတွင် ချုပ်နှောင် ထားခဲ့ကာ မတ် ၂ရက်မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုစဉ်ကလည်း စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသည့် လူငယ်များ ဘုရားကျောင်းဝန်းအတွင်း ပြေးဝင် ပုန်းသည်ဟု သတင်း ရသဖြင့် ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
KBC သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဇုန်နယ်အသင်းတော်များ အဖွဲ့ ၁၅ ဖွဲ့၊ အသင်းတော်ပေါင်း ၄၂၉ ၊ အသင်းသူအသင်းသား ပေါင်း ၄ သိန်းကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ ကချင်လူထု၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများတွင် ဦးဆောင် ပါဝင်နေပြီး ကချင်လူထုအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှုကြီးသည့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားသည်နှင့် ပတ်သက်၍ KBC က အာဏာရှင်စနစ်ကို လက်မခံကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး တရား မျှတသည့်နိုင်ငံ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက်ရန် နေ့စဉ် ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။
လားရှိုးတွင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကို ရဲအင်အားဖြင့် တံခါးများဖျက်၍ စီးနင်း
Topics: ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်း, စစ်တပ်, မိုးညှင်းမြို့, ဝင်ရောက်ရှာဖွေ